6600lm 5000K 60W ada mgbidi mkpọ oriọna China Manufacturer
Nkọwa:Ọkụ ọkụ na-agbanye LAMP,Ọkụ ọkụ na-atụ egwu,60W AHỤKWỤKWỤKWU ỤWA
Home > Ngwaahịa > Mgbidi Mgbidi > Enwụrụ Led Wall Light Fixtures > 6600lm 5000K 60W ada mgbidi mkpọ oriọna
Ihe Nlereanya.: BB-RSD-002
Ụgbọ njem: Air
60W Egwuregwu Wall Wall ahia na Industrial Outdoor Lighting, IP65 Waterproof - DLC & ETL. LED Wallpack bụ nhọrọ ntanetị maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka nbata, nkwụnye ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a Wall Pack ga-enye ìhè dị gị mkpa maka ngwa gị, yana ịchekwa gị ruo 85% na ụgwọ ike gị.
1), 60 W LED Wall pack Light, 6600lm na 5000K Super Bright White Outdoor LED Security Light, 175W HPS Metal Halide Bulb Replacement.
2), MGBE MGBE - Ịrụ ọrụ siri ike ugbu a bụ ihe gara aga! Ntuziaka nchịkọta dị mfe anyị na-enye ntụziaka site na ntụziaka maka nhazi ngwa ngwa.
3), Ngwongwo mgbidi ọkụ bụ ihe ọkụkụ ahịa nke na-arụ ọrụ na akụkụ nke ụlọ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ụlọ elu ụlọ, na ebe ndị ọzọ dị n'akụkụ ụlọ ahịa. Ọ bụghị nanị na ha na-enye ìhè dị ọkụ nke ike kama ha dịkwa mma nchekwa maka ụlọ ahịa na-eme ka ha gaa nhọrọ na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ azụmahịa taa.
4), IP65 akwa mmiri na mmiri na-eme ka R Lcess Wall Lamp na- arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi na ebe mmiri na-ekpuchi mmiri.
5), Enyemaka afọ ise - Anyị na-ewepu ihe ize ndụ iji hụ na afọ ojuju gị. Bbier afọ ise na-enweghị njedebe ikike nyere gị kpuchie! Kpọtụrụ anyị maka ngbanwe ngwa ngwa na ngwa ngwa.
60W LED Wall Pack Mpụga Mpụga 5000K Kpọtụrụ ugbu a
80W LED Wall Pack Mgbaaka 5000K 8800 Lumens Kpọtụrụ ugbu a
100 Watts LED Wall Pack Light 11000 Lumen Kpọtụrụ ugbu a
120 Watts LED Wall Pack Light 5000K Kpọtụrụ ugbu a
20W N'èzí Led Wall Pack Light Photocell Kpọtụrụ ugbu a
30W Led Wall Pack Light Dusk to Dawn Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ ọkụ na-agbanye LAMP Ọkụ ọkụ na-atụ egwu 60W AHỤKWỤKWỤKWU ỤWA Ejiri ọkụ ọkụ na-enye 200W Ọkụ ọkụ Wall Wall Ịrụ ọrụ na-ewu ewu Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Ọkụ Ọkụ Uk